Itoobiya: “dowladdu waxay ku qasbanaatay in ay qaaddo tallaabo adag” | Xaysimo
Home War Itoobiya: “dowladdu waxay ku qasbanaatay in ay qaaddo tallaabo adag”
Itoobiya: “dowladdu waxay ku qasbanaatay in ay qaaddo tallaabo adag”
Inkasta oo ay dowladdu horay u sheegtay iney ciidamadeeda ay u howlgelisay iney shacabka weerarrada uga imanayo kooxaha hubeysan ay ka difaacdo haddana, sida baraha bulshada la isla dhex marayo waxaa ciidamada dowladda Itoobiya laftooda lagu eedeeyaa iney qayb ka yihiin dhibaatada shacabka loo geysto.
Haddaba abaanduule ku xigeenka ciidamada Itoobiya General Birhaanu Julaa oo BBC laanteeda Amxaariga oo amuurtaasi iyo guud ahaan xaaladda amni ee dalkaasi Itoobiya wareysi la yeelatay.
“Ciidamada aan anigu hoggaamiyo shacab ma waxyeelleeyaan”
General Birhaanu Julaa wuxuu si adag u diiday iney ciidamada uu isagu madaxa u yahay inay shacab dhibaata u geysteen.
“Arrintaasi waa khalad, xoogagga hubeysan ayaa shacabka dhibaatada ku hayey labadii sano ee ay dhadhaqaaqooda wadeen, marka dowladda si ay sharci iyo kala dambeyn ugu soo dabbaasho deegaannada ay dhibaatooyinka ka jiraan dowladda waxay ka howl gelisay ciidamo tira badan” ayuu yiri.
“Ciidamadu howlaha ay qabanayaan waxaa kow ka ah iney shacabka caadiga iyo burcadda ay kala saaraan, burcaddana ay tallaabbo ka qaadaan. Hase yeeshe, wararka baraha bulshada la isla dhex marayo sidaa iney ka duwan yihiin waan ogsoonnahay. Ciidamada qaranku haba yaraatee wax dhib ah uma geystaan dad shacab ah” ayuu yiri.
“Howlgal gaar ah”
“Xogagga halkaasi ka dagaallamaya waxaan marar badan ka baryeynay iney nabadda u soo noqdaan, hase yeeshee baryada markay ka badatay waxayba billaabeen iney isa sii xoojiyaan dhibaatada ay shacabka ku hayaanna ay sii laba jibbaaraan.”
“Shacabka ayey had iyo goor u hanjabaan, dhacaan, silciyaan oo ay afduubtaan 60 ilaa 70 km markay geeyaan oo ay garaacaan kaddib ay soo daayaan, arrimaha noocaasina waxaa lagu yaqaannay oo keli ah Al-shabaab, xataa Al-shabaab falalka noocaasi hadda ma sameeyo. Sidaa darteed, dowladda waxay ku qasbanaatay tallaaba adag oo aan soo noqosha lahayn iney kooxahaasi ka qaaddo.” ayuu yiri General Birhaanuu Julaa.
“Dowladduna waxay aamintay iney kooxdani marnaba isbeddelayn waxa keli ee wax lagu fahansiin karana ay tahay oo keli ah xabbad lagala hortago” ayuu yiri.
“Adeegyada taleefoonnada iyo Internetka oo laga jaray galbeedka deegaanka Oromada ee ay ciidamadu howl galka ka wadaan waxay suuragelisay in tallaabbada laga qaadayo maleeshiyaadka dagaallada halkaasi ka wado lagu guuleysto” ayuu sii raaciyey General Birhaanuu Julaa.